Regional Archives - Page 198 of 198 - Yangon Media Group
မန္တလေး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် ၇၂ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် MINGALARBAR 72 ပန်းချီပြပွဲတွင် ထီးအရွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရေးဆွဲထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပန်းချီကားကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရေးဆွဲခင်း ကျင်းပြသကြောင်း သိရသည်။ MINGALARBAR...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျွန်းပင်ကြီး ရှာဖွေ မှတ်တမ်းတင်ရေး အဖွဲ့အား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြ??
ဟုမ္မလင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျွန်းပင်ကြီး ရှာဖွေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားကို ဟုမ္မလင်းမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပရာ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ် ဦးခင် မောင်လှ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး...
မန္တလေး၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း အစွန်းရောက် တိုက်ခိုက်အကြမ်းဖက်များနှင့် ပြည်ပစွက်ဖက်မှုများ ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၂ လမ်း၊...
မကွေး၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ မကွေး တိုင်းဒေသကြီး မကွေးမြို့အထက (၁)လမ်းနှင့် ပြည်တော်သာ လမ်းကြားသစ္စာလမ်းကန်သာရပ်ကွက် တွင်မကွေးမြို့၏ ပထမဆုံးအနု ပညာပြခန်းဖြစ်သည့် ရွှေညာမြေအနုပညာပြခန်းကို စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နံနက်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ''ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်ပါ။ ပန်းချီပြခန်းရှိချင်တယ်...
ဖလမ်း(ဆူရ်ဘုန်) လေယာဉ်ကွင်းတည်ဆောက်ရေးတွင်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရမှ ကျပ်သန်း ၁၂၀၀ စိုက်ထုတ်မည်
ဖလမ်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၆- ချင်းပြည် နယ် ဖလမ်းမြို့အနီး တည်ဆောက် နေသည့် ဆူရ်ဘုန်လေယာဉ်ကွင်း တည်ဆောက်ရေးတွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေတွင် ဘတ်ဂျက်ပါ ဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ချင်းပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကျပ်သန်း ၁၂၀၀ ကို စိုက်ထုတ်သုံးစွဲ...
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄-ပျဉ်းမနားမြို့လူငယ်ကွန်ရက် မှကြီးမှူး၍ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ပညာ ရေးမှူးရုံး မြန်မာနိုင်ငံပန်းချီပန်းပု အစည်းအရုံး(ပျဉ်းမနား) နေပြည် တော်ကောင်စီ ၀ိုင်အမ်စီအေ အသင်းနှင့် ကရင်ဖြူလူငယ်ကွန် ရက်တို့ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး နေ့အထိမ်းအမှတ် လူငယ်နှင့် ငြိမ်း...
မန္တလေး၊ စက်တင်ဘာ ၂၃- ရှေး ဟောင်းသမိုင်းဝင် မန္တလေးတောင် ပေါ်သို့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့် သည်များအနေဖြင့် မန္တလေးမြို့၏ နေဝင်ဆည်းဆာအလှနှင့် မြို့အင်္ဂါ ရပ်များအား တက်ရောက်ကြည့်ရှု မှုအတွက် ယခုကောက်ခံလျက်ရှိ သော ငွေကျပ် ၁ဝဝဝ...
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၃- ရှမ်း ပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးတို့တွင် ပြည်သူများလည်ပတ် နိုင်ရန်အတွက် ဆင်စခန်းအသစ်နှစ် ခုကို ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်လုပ် ရေးဌာနမှ သိရသည်။ အဆိုပါဆင်စခန်း ဖွင့်လှစ် မည့် နေရာများမှာ...
Page 198 of 198 Prev 1 … 197 198
အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသော နေပြည်တော်စည်ပင်မှ ဌာနမှူးအမှုတွင် တစ်မှုကို မှားယ?
စီရော်နယ်ဒို ကို ပီအက်စ်ဂျီအသင်း ထိတ်လန့်နေမည်ဟု နည်းပြ ဇီဒန်း ကြုံးဝါး